स्वास्थ्य – नेपाल रफ्तार
काठमाडौँ : भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३९ हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीन महिना अघिसम्म लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३९ हजार ४४१ जनामा संक्रमण भएको छ । यससँगै भारतमा संक्रमितको संख्या ३ करोड १३ लाख ३१ हजार १४५ पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा ४ लाख १५ हजार ७५५ जना संक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै त्यहाँ एकै दिन ५३६ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख २० हजार ३८ पुगे...
जिल्लामा ९३ हजार बढीले कोरोनाविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् । दुई वटा फरक फरक कम्पनीका गरी ९३ हजार ३७२ ले खोप लगाएका हुन् । तीमध्ये २३ हजार ९३८ ले दोस्रो डोज लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकप्रसाद तिवारीका अनुसार जिल्लामा गत माघबाट खोप अभियान सञ्चालन भएको हो । शुरुमा कोभिसिल्ड खोप लगाइएको थियो । पहिलो डोज ३९ हजार ८७९ ले लगाएकोमा दोस्रो डोज १३ हजार १७२ ले मात्रै लगाएका छन् । कोभिडसिल्ड अन्यलाई बाँकी रहेको छ । त्यस्तै भेरोसेल ५३ हजार ४९३ ले पह...
काठमाडौं : देशभर कोरोना संक्रमणदर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमणदर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने आँकलन थालिएको छ । अहिले नेपालमा संक्रमणदर १९.३ प्रतिशत रहेको छ । संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा ओरोलो लाग्न सकेको छैन । संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने अनुमान गरिरहँदा जनस्वास्थ्यविद् र चिकित्सकहरूले भने बन्दाबन्दी नै कोरोना नियन्त्रणको प्रमुख उपाय नभएको तर्क गर्न थालेका छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी नै ...
काठमाडौँ : हर्षा, पाइल्स, बबासीर, हेमोरोईड्स, अर्ष तथा मूलब्यादी जस्ता नामबाट परिचित यो रोग अन्तर्गत मलद्वारा तथा मलाशयका भित्ताहरुमा स्थित रक्तनलीहरु विभिन्न कारणले सुन्निन गई देखापरेका श्रृङ्खलाबद्ध समस्याहरू पर्ने गर्छन् ।योग, आयुर्वेद, युनानी र परम्परागत चाईनीज चिकित्सा (टी.सी.एम.) जस्ता हजारौ साल पुराना चिकित्सा प्रणालीका वैद्यकीय ग्रन्थहरू देखि बाइबल जस्तो धार्मीक ग्रन्थहरूमा समेत यो रोगलाई अत्यन्त कष्टकारक रोगको रूपमा सूचिकृत गरिएको छ । मानवतालाई प्राचिन समयदेखि नै प्...
फलफूल कुन समयमा कसरी खाने ?
काठमाडौँ : खानपिनका लागि प्रकृतिले हामीलाई अनेकौं परिकारह दिएको छ । ती परिकारहरुमा पनि हामीले विभिन्न स्वाद तयार पारेर आफ्नै किसिमको खाना बनाउने गरेका छौं । एकातिर प्रकृतिले दिएको स्वादलाई जस्ताको त्यस्तै आश्वाधन गर्न हाम्रा केही फलफूलहरु तयार छन् भने कृतिम स्वाद बनाएर पनि यावत किसिमका खानाहरु खाने गरिन्छ । सभ्यताको सुरुवातमा सबै कुराहरु काँचै खाने चलन थियो । कुनै समय फलफूलले मात्रै जीवन धानेका मानिव जाति अहिले नियमित खानाको रुपमा कृतिम स्वाद लिएर प्राकृतिक स्वादको लागि फलफ...
काठमाडौँ : निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागको छ । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमणदर उकालो लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेसँगै सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दै गएको पाइएको हो । निषेधाज्ञा खुलेसँगै भीडभाड तथा जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू नगर्नेजस्ता कारणले सङ्क्रमणको दर बढेको पाइएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले साउन लागेपछि मानिसको आउजाउ बढेपछि ...
सजिलै मोटोपना घटाउने यी हुन् ७ फलफूल
काठमाडौं : आजभोलि व्यस्त जीवनशैलीले गर्दा हामीले आफ्नो खानपानमा ध्यान दिन सकिरहेका हुँदैनौं।जसले गर्दा शरीरमा विभिन्न रोग लाग्नुको साथै मोटोपनले सताउने गर्छ। शरीर स्वस्थ्य राख्न सन्तुलित खानाको साथै फलफूल पनि खानुपर्छ। फलफूलमा भिटामिन ए,बी, सी,ए र फाइबरजस्ता तत्व पाइन्छन्।फलफूल सही समयमा खानु शरीरका लागि निकै फाइदा हुन्छ। स्वास्थ्य विज्ञकाअनुसार फलफूलको सेवन बिहान गर्नु राम्रो मानिन्छ। मेवा मेवामा क्याल्सियम, भिटामिन, आइरन, मिनरल्स र फास्फोरसका मात्रा बढी पाइन्छ। यसमा खाना ...
थाइरोइडको समस्या छ ? यी तीन योगासनले हुन्छ निको !
काठमाडौँ : योगाले शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नुको साथै मानिसको मनलाई पनि शान्त राख्छ । अहिले पुरै विश्वमा योगाको महत्वको बारेमा बुझ्दै छ । शारीरिक रूपले कमजोर मानिसको लागि योगा मात्र एउटा यस्तो तरिका हो जसले स्वस्थ्यकर बनाउन सहयोग गर्छ । आजभोल थाइरोइड यस्तो रोग बनेको छ, जुन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । थाइरोइड घाँटीमा पाइने एक ग्रन्थी हो जसले शरीरको मेटाबोलिज्मलाई नियन्त्रित बनाई राख्छ । जब थाइरोइड ग्रन्थी अधिक थाइरक्सिन हर्मन निष्काशन गर्न शुरु गर्छ तब शरीरमा थुप्रै समस्या उत्पन...
चीनबाट आठ लाख मात्रा खोप प्राप्त
काठमाडौँ : छिमेकी मुलुक चीनबाट आज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ आठ लाख मात्रा प्राप्त भएको छ । चीनसँग खरीद गरिएको खोप नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजबाट आज खोप ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । आज आएको खोप टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको चिस्यान केन्द्रमा राखि देशभरि पठाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निगमको नियमित उडानमार्फत लगातार चार दिनसम्म खोप चीनबाट आउने जानकारी दिनुभयो । यही साउन १५ गतेसम्म ३२ लाख ...